Ikhaya | TRINITY
I-TRINITY inikeza izixazululo zefenisha zomhlaba jikelele zezikhala ezihlangene.
Indaba Yefenisha Yamahhotela
Icase Ifenisha Yezindlu Ezihlinzekiwe
Icala lefenisha elungisiwe
Ikesi Ifenisha Yendawo Yomphakathi
Indaba Yefenisha Yehhotela
Indaba Yefenisha Yokudlela
I-TRINITY Ihhotela lokukhiqiza ifenisha
UFoshan Zhongsen （I-TRINITY） ihlinzeka ngezixazululo ezikhethekile zomhlaba wonke zehhotela, Amahhotela, iVillas, i-Apartment nezinye izikhala ezihlangene njengezokudlela nezakhiwo zikaHulumeni.
Dala imikhiqizo esezingeni eliphezulu embonini futhi wenze imikhiqizo emihle kakhulu.
I-TRINITY ngumkhiqizi wefenisha yehhotela yokuthengisa anganikeza izixazululo zefenisha ezobuchwepheshe.
Igumbi le-Suite Model - Ifenisha Yehhotela Yezentengiselwano
Igumbi le-Suite Model - Ifenisha Yehhotela YezentengiselwanoIgama elingukhiye: Ifenisha yehhotela yezentengiselwano.Uhlobo lwefenisha: Ifenisha yehhotela.Ukusetshenziswa Okucacile: Ihhotela Lobby.Isicelo: Ihhotela, indawo yokuhlala, indawo yokuhlala, i-Villa, indawo yokudlela, ezinye izindawo zomphakathi.Isitayela Somklamo: Idizayini yanamuhla.Indwangu: Ukhuni oluqinile, iphaneli, isikhumba, indwangu, insimbi, imabula. (Eyenziwe ngezifiso, ngokwezidingo zamakhasimende)Izitifiketi: Iso9001 / SGS / PEFC.
Igumbi lefenisha yefenisha ye-Suite - Ifenisha Yangokwezifiso zehhotela
Igumbi lefenisha yefenisha ye-Suite - Ifenisha Yangokwezifiso zehhotelaIgama elingukhiye: Ifenisha yangokwezifiso yehhotela.Iphrojekthi yehhotela: I-Mai House Saigon Hotel - I-5 Star ilinganiselwe.Uhlobo lwefenisha: Ifenisha yehhotela.Ukusetshenziswa okuqondile: Ihhotela Lobby.Isicelo: Ihhotela, indawo yokuhlala, indawo yokuhlala, i-Villa, indawo yokudlela, ezinye izindawo zomphakathi.Isitayela Somklamo: Idizayini yanamuhla.Indwangu: Ukhuni oluqinile, iphaneli, isikhumba, indwangu, insimbi, imabula. (Eyenziwe ngezifiso, ngokwezidingo zamakhasimende)Izitifiketi: Iso9001 / SGS / PEFC.
Igumbi lemodeli yeSuite - Amaphakheji wefenisha yehhotela
Igumbi lemodeli yeSuite - Amaphakheji wefenisha yehhotelaIgama elingukhiye: Amaphakeji wefenisha yamahhotela.Uhlobo lwefenisha: Ifenisha yehhotela.Ukusetshenziswa Okucacile: Ihhotela Lobby.Isicelo: Ihhotela, indawo yokuhlala, indawo yokuhlala, i-Villa, indawo yokudlela, ezinye izindawo zomphakathi.Isitayela Somklamo: Idizayini yanamuhla.Indwangu: Ukhuni oluqinile, iphaneli, isikhumba, indwangu, insimbi, imabula. (Eyenziwe ngezifiso, ngokwezidingo zamakhasimende)Izitifiketi: Iso9001 / SGS / PEFC.
Igumbi lefenisha yefenisha ye-Suite - Ifenisha yamahhotela eBoutique
Igumbi lefenisha yefenisha ye-Suite - Ifenisha yamahhotela eBoutiqueIgama elingukhiye: ifenisha yamahhotela e-boutique.Uhlobo lwefenisha: Ifenisha yehhotela.Ukusetshenziswa Okucacile: Igumbi lokulala lehhotela.Isicelo: Ihhotela, indawo yokuhlala, indawo yokuhlala, i-Villa, indawo yokudlela, ezinye izindawo zomphakathi.Isitayela Somklamo: Idizayini yanamuhla.Indwangu: Ukhuni oluqinile, iphaneli, isikhumba, indwangu, insimbi, imabula. (Eyenziwe ngezifiso, ngokwezidingo zamakhasimende)Izitifiketi: Iso9001 / SGS / PEFC.
Sisaqhubeka nokuncika ekukholweni nasezinkolelweni zethu, ukubukela imikhiqizo iyaqhubeka nokwenza ngcono, futhi ekugcineni, ngamazinga aphezulu kuphela lapho singaphumelela khona emncintiswaneni wesikhathi eside!
Njengomhlahlandlela wezixazululo zangaphakathi zokungenisa izihambi, siyaziqhenya ngoHlelo Lwethu Lokukhiqiza Lwesiphelo olwenzelwe ukuletha inani elihle kakhulu kuphrojekthi ngayinye esiyenzayo. Ngaphandle kohlelo lwethu lokukhiqiza lwe-End-to-End, sinemafektri ethu angaphakathi endlini avumela amakhasimende ethu ukuthi ajabulele izinzuzo ezinhle kakhulu ezihlangene ngezindleko, ikhwalithi kanye nokusebenza kahle.
Sinezimboni zethu zangaphakathi endlini ezivumela amakhasimende ethu ukuthi ajabulele izinzuzo ezihle kakhulu ezihlanganisiwe ngezindleko, ikhwalithi kanye nokusebenza kahle. I-TRINity inikeza insizakalo eyenziwe ngefenisha yehhotela futhi inikezela ngezixazululo zefenisha.
Inkampani ineminyaka engaphezu kwengu-20 isipiliyoni ekwenzeni ifenisha yamahhotela ngokwezifiso, izixazululo zefenisha yamahhotela, ukufakwa kwesayithi, njll.
Imikhiqizo enekhwalithi Eqinisekisiwe-
Inqubo yayo yonke imikhiqizo kumele icubungulwe ngokuqinile futhi ihlolwe ukuthi ihlolwe, qiniseka ukuthi yonke imininingwane yemizuzu eyodwa ihlangabezana kahle nokufunwa kwekhasimende.
Indawo Ethandekayo Yendawo
I-Foshan Zhongsen （I-TRINITY） ifenisha Co, Ltd. isenkabeni yokuthumela olwandle olwandle lwePacific, Indian kanye ne-Atlantic, okuyi China ethunyelwa nje eSoutheast Asia, Oceania, Middle East kanye nase Africa.
Noma ngabe abaphathi bamaphrojekthi wamahhotela, abaphathi bamakhasimende, abaklami bezakhiwo, abaphathi abathenga nabasebenza ngamafenisha wehhotela, bonke banezizinda ezihlukile futhi babelana ngentshisekelo efanayo yokufeza umsebenzi omuhle kakhulu.
Iningi lezinto ezibonakalayo esizilethayo zenziwe ngokwezifiso - izinselelo ezihlukile ezivelayo abazethulayo.
IZhongsen islingling umlingani ofanele futhi umenzi wefenisha yamahhotela enziwe ngezifiso.
Iningi lamaphrojekthi esiwahambisayo enziwe ngokwezifiso, futhi sijabulela izinselelo ezihlukile ezilethwayo. Abaqambi bethu bemikhiqizo engaphakathi endlini banganikeza izeluleko eziwusizo zobuchwepheshe ezintweni zokwakha nasemhlobisweni ngenkathi beqinisekisa ukuthi ukwakheka kwawo kuyisitayela futhi kuqinile. Uma sesivunyiwe, kusho ukuthi amandla ethu okukhiqiza angaphakathi endlini angakwazi uku asingatha kalula izinto zokwakha nemikhiqizo eseqediwe. Futhi singashesha ukulandelela izinto ukuze sihlangabezane nemikhawulo ebekiwe. Xhumana ne-TRINITY ukuhlinzeka ngezixazululo zefenisha yobungcweti.
I-OEM Custom Solutions
Qagela ngokuqhubekayo imikhiqizo yakho futhi uthuthukise ubuciko bakho ngokuqhubekayo.
Isiko Enze Isimanje Senzelwe Igumbi Lento Yegumbi Lesivakashi elibekwe kwi-America Jw Marritt Spa Hotel Project
]Isiko Enze Isimanje Senzelwe Igumbi Lento Yegumbi Lesivakashi elibekwe kwi-America Jw Marritt Spa Hotel Project
UShunde Fooshan China izinkanyezi ezinhlanu izinkanyezi okunethezeka design Ihg Hotel Ifenisha Umhlinzeki
]IShunde Fooshan China izinkanyezi ezinhlanu ukuklama ukuklama ihg Hotel Hotel Sublivel.
Izinkanyezi Eziyisihlanu I-St Regis Hotel Ifenisha Ifenisha
]Izinkanyezi Eziyisihlanu I-St Regis Hotel Ifenisha Ifenisha
Ifenisha yesitayela sase-Italiya esenziwe ngezifiso usayizi wegumbi lokulala le-Italy 5 Star Season Season Hotel Project
]Ifenisha yesitayela sase-Italiya esenziwe ngezifiso usayizi wegumbi lokulala le-Italy 5 Star Season Season Hotel Project
Vele ushiye i-imeyili noma inombolo yakho yocingo kwifomu lokuxhumana ukuze sikuthumele isilinganiselo samahhala semiklamo yethu ebanzi!